Q: njani na isiqiniseko Umgangatho Good siye safumana?
A: Okokuqala, Thina sinobawo QC kwisebe ulawulo Umgangatho ukusuka izinto zokwenza imveliso kude iimveliso ugqibile. Okwesibini, Siya kwenza Inpsection ngexesha imveliso kunye nasemva Production. Okwesithathu, kuza kuvavanywa zonke iimveliso zethu phambi ukupakisha, nokuthumela iileta. Siya kuthumela Ukuhlolwa okanye uvavanyo ividiyo xa umxumi akafiki zokutshekisha personly.
Q: Kuthekani warrenty?
A: Zonke Products zethu ukuba unyaka-1 warrenty yinkonzo yeSondlo Life-Long. Siza kukunika inkxaso ezamahala zobugcisa.
Q: Ingaba unikezele naluphi na uncedo malunga Products Operation?
A: Zonke matshini phakathi imveliso intshayelelo, Incwadi yezikhokelo e IsiNgesi leyo ukuba zonke iingcebiso ukusebenza kunye nezindululo Maintenance ngexesha usebenzisa. Ngelo xesha, Siya nazo ukuxhasa kuwe ngenye indlela, Like zikunika Video, Bonisa ndikuyalele ngoxa efektri yethu okanye iinjineli zethu mveliso yakho xa iceliwe.
Q: Ingaba Ndingalufumana njani abaza kuzisebenzisa?
A: Siya Somrhaqa ezinye iindawo wear ekhawulezayo i oda yakho, kwakunye nezinye izixhobo ezifunekayo kulo matshini leyo ezamahala iya kuthunyelwa kunye wtih Umyalelo wakho kwibhokisi isixhobo. Thina zonke iindawo spare umzobo ngaphakathi kwiNcwadana uluhlu. Wena wayenokuthi nje thina abaza kuzisebenzisa No. yakho In elizayo. Siza ngaba ukuxhasa yonke indlela. Ngaphezu koko, ngokuba beveling bathezi umatshini izixhobo Wotho kunye ezifakelwa, Kuyinto uhlobo comsumable ukuba koomatshini. Loo nto acele yemiyinge rhoqo nga leyo easyly ukufumana kwimarike yasekuhlaleni ehlabathini lonke.
Q: Yintoni na lakho Umhla Delivery?
A: Kuthatha iintsuku 5-15 ukuba imifuziselo rhoqo. Ke kaloku iintsuku 25-60 ukuze ngomatshini elungelelanisiweyo.
Q: Ingaba Ndingalufumana njani iinkcukacha ezingakumbi malunga nale umatshini okanye silimars?
A: pls ubhale phantsi imibuzo yakho kunye neemfuno ukuba ngezantsi kwibhokisi aphicothe. Siya kuyitshekisha uze uphendule kuwe imeyili okanye Fonela Iiyure 8.